ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Ningbo Daohong Machine Co. , Ltd.
1.Daohong ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာကိုကိုင်တွယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးကိုအမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ကနေဒါ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ ကုမ္ပဏီ၏အတွေးအခေါ်အပေါ် အခြေခံ၍“ အရည်အသွေးသည်ဘဝ” ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီမံခန့်ခွဲ။ တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂။ ၂၀၁၄ မှာငါတို့ရခဲ့တယ် သံမဏိဆုံလည်အစိတ်အပိုင်းများမူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်။ unded Hui heng စက်ရုံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သည်။
3. ငါတို့ထက်ပိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် 50000 ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အမျိုးအစားများအတွက်အမျိုးအစားများ။ (စက်ရုံ ၂ ခု + လုပ်သား ၁၀၀ + ဒီဇိုင်း ၅၀၀၀၀ + အမှာစာအလျင်အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း) ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏ ၉၀% ကိုဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုပေးရန်ဂျပန်နှင့်ဂျာမနီမှတင်သွင်းသည်။
4. ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားသည်ထုံးစံအတိုင်းထုံးစံအားဖြင့်စီအင်စီစက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ရိုးတံများ၊ ဂီယာနှင့်ဂီယာရိုးအစိတ်အပိုင်းများ၊ တံဆိပ်တုံးအပိုင်းများပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေးငယ်သောအချင်းတိကျသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကြိတ်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်တီဗီ Mount, ရပ်နေစားပွဲခုံ, surfing အစိတ်အပိုင်းများ;
၎င်းတို့သည် ROHS၊ SGS၊
ထက်ပိုအတူ 10 နှစ် အတွေ့အကြုံများကိုတင်ပို့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုစက်ရုံနှင့်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိသည်။
နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောသတ္တုထုတ်ကုန်များ၊ ကုမ္ပဏီသည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုများစွာအလေးထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ထက်ပိုတင်ပို့ခဲ့ကြသည် 30 ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများ။
ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် ပြည့်စုံစေမည် တိကျသောသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကို ဦး ဆောင်နေပြီးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကိုထူထောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Technician Engineer သည်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်နမူနာများနှင့်အကြံဥာဏ်များအရတရားဝင် 2D ပုံဆွဲခြင်းနှင့် 3D ပုံဆွဲခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏အကြံဥာဏ် + DAOHONG = ထုတ်ကုန်များ
CNC သတ်မှတ်ချက်အလိုကျ LATHE
တူးဖော်ခြင်းနှင့် taping စက်
CNC LATHER အပိုပစ္စည်းများ
Hardness စမ်းသပ်မှု (SCLEROMETER)
CNC စက်: တိကျမှန်ကန်မှု± 0.01mm
CNC Precision Automatic Lathe: တိကျမှု± 0.003mm
ခုံ: တိကျမှန်ကန်မှု± 0.01mm
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်
ကျနော်တို့ CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများ 50000 ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။